Shirkadda MÜSİAD waxay kor u qaadday hubkeeda soosaaridda dhaqaaqay ka dib dillaacay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulShirkadda MÜSİAD waxay kor u qaadday hubkeeda soosaarida dhaqaajinta kadib dillaacay
15 / 05 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Musiad wuxuu gacmihiisa ku wareejinayaa dhaqaajinta waxsoosaarka kadib faafitaanka cudurka
Dunida ayaa riixday badhanka si ay dib ugu wareejiso giraangiraha. Turkiga ayaa ku soo bandhigi doona hannaan cusub habkaan: saldhigyada wax soo saarka go'doonsan. Saldhigga koowaad ee heerarka 'MÜSİAD' waxaa laga furi doonaa Tekirda Te 15ka Juun. Marka saldhigu xidho albaabbada, wuxuu lahaan doonaa awood soosaar buuxda oo isku filan.
Tallaabooyinka caadiga ah ayaa la bilaabay in laga qaado adduunka oo dhan si loo soo celiyo giraangirihii waxsoosaarka ee lagu joojiyey cudurka faafa ee coronavirus. Waxay u timid codsi kale oo loogu talagalay hanaanka caadiga ah ee Turkiga.
Iskaashatada Warshadaha Madaxa Banaan iyo Ganacsatada (MÜSİAD) ayaa u rogay mashruuca, oo bilaabay 7 sano kahor 'Qeybaha Warshadaha Dhexdhexaadka ah', 'Meelo Wax Soo Saar ah'. Mashruucu wuxuu ka helay ogolaanshaha lagama maarmaanka ah Wasaaradda Wershadaha iyo Teknolojiyadda, Wasaaradda Deegaanka iyo Wasaaradda Beeraha. Saldhigga wax soo saar ee go'doonsan, ee loogu talagalay in lagu dejiyo 1000 qoys iyo ku dhawaad ​​4 oo qof, ayaa lagu aasaasay caqli ku-noolaashaha deegaanka, ee ma aha aagga wershadaha abaabulan (OSB).
Saldhigga wax soo saarka, oo ah halka loo yaqaan 'Logistics Guest House', oo loo sameeyay ku habboon 14 maalmood oo karantiil ah, ayaa go'doonsan doona gabi ahaanba waa laga go'doomi doonaa cudurka faafa iyo indhoolayaasha kale. MÜSİAD waxay la wadaagtay faahfaahinta saldhigyada maalgashiga go'doonka ah ee World warbixinta ay cinwaan uga dhigtay "Xarumaha Soosaarka iyo Maalgashiga".
4 gobol ayaa la qorsheeyay, mid waxay ku taal Istanbul
Saldhigga wax soo saar ee ugu horreeya, oo dhismihiisu dhammaaday, ayaa laga hawlgelin doonaa Juune 15 Tekirda in. Wadarta tirada qorsheysan ee laga dhisi doono Istambul 4 saldhig wax soo saar 2aad oo ku yaal koonfurta Turkiga kadib Xasan iyo wuxuu qorsheeyay 3-deedii 4-aad iyo ugu dambeyntiina gobolka Badda Madow. Mashruucu wuxuu sidoo kale noqon doonaa isweydaarsiga SME oo ay albaabadu u xiran yihiin muuqaalkiisa. Waxaa loo qorsheeyay in saldhigu uu ka koobnaado waaxaha dalka ee ay tahay in la sii wado, wax soo saarkuna lagama jari doono xaalad kasta oo aan caadi ahayn.
Kaabayaasha si looga hor tago 300 sano 8.5 Dhulgariir iska caabin ah
Warbixinta la diyaariyey, waxaa lagu sheegay in saldhigyada wax soo saarka go'doonsan / nadiifsan ay ka shaqeyn karaan gebi ahaan silsiladda wax soo saarka- laga soo bilaabo saad ilaa iibka dhammaan noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka. Loo shaqeeyayaashu waxay awoodi doonaan inay ganacsi ku yeeshaan bedelka iyo waaxaha dhammaystirka ah. Shaqaaluhu waxay awoodi doonaan inay la noolaadaan qoysaskooda oo ay la kulmaan baahiyahooda caafimaad. Waxaa ka mid noqon doona xarumaha waxbarashada, dugsiyada sare ee xirfadda iyo shaqaale aqoon u leh ayaa la buuxin doonaa. Dhammaan bakhaarradu waxay kuxiran yihiin bakhaarada, kaydinta iyo nadaafadda oo sii wadi kara wax soo saarka iyaga oo albaabada u xidha masiibo suurogal ah ama musiibo dabiici ah oo suurogal ah in lagu maareeyo. Waxaa jiri doona nidaamyo shaandheyn iyo isdaahirinta lafteeda. Kaabayaasha saldhiga, oo la dhisay, waxay socon karaan 300 sano. Soosaar waara ayaa loo fulin doonaa iyadoo la tixgelinayo isbeddelka cimilada. Daaweynta biyaha roobka, lugta biyaha, raadad raadinta roobka iyo bacrinta ayaa ahmiyad la siinayaa. Dhismooyinka, guryaha jiifka, xarumaha caafimaadka ee saldhiga waxsoosaarka ayaa sidoo kale u adkaysanaya dhulgariir cabirkiisu yahay 8.5 iyo wixii ka sareeya.
MUSIAD ayaa dejin doonta heerarka
Warbixintu waxay ku nuuxnuuxsatay in hay'adda qaab-dhismeedka caadiga ah ee moodalka soosaarka go'doominku ay yihiin MUSIAD. Waxaa la cadeeyay in MÜSİAD ujeedadeedu tahay inay si dhakhso leh ugu ballaadhiso saldhigyadan dhexdooda daneeyayaasha kale ee wax soo saarka leh, iyada oo mudnaanta la siinayo xubnaheeda ku sugan Anatolia iyo magaalooyinka waaweyn. Intaa waxaa u dheer, maalgelinta mashruuca waxaa lagu xalliyay maal-gashiga maal-gashiga iyo bangiyada ka-qeyb-galka.
Talo soo jeedinta Wasaaradda Tamarta iyo Dhaqaalaha ee Jarmalka
Warbixinta ay soo diyaarisay MUSIAD, waxaa hoosta laga xariiqay in mashruuc la mid ah ay ka wada hadashay Wasaaradda Tamarta iyo Dhaqaalaha Jarmalka laakiin mashruuca MÜSİAD uu tusaale u yahay 7 sano kadib.
TARGET: SHAQAALAHA KHATARTA-KA-QAADASHADA SYNCHRONIZATION
Warbixinta, oo lagu xusay in dhibaatooyinka la xiriira maalgashiga iyo dhiirrigelinta dhiirrigelinta ay ka dhasheen kala-soocidda gaar ah ee wax soo saarka, ganacsiga iyo maalgashiga, iyo karti-u-yeelashada is-af-garad ka dhexeeya, “Si kastaba ha noqotee, saddexdaa fikradood waa inay ku shaqeeyaan isku-xirnaan isla markaana ay ku quudiyaan macluumaadka midba midka kale si ay u gaaraan koboc waara. Iyadoo la raacayo qaab la mid ah silsiladda sahayda, waxaan ku qaadi doonaa qulqulkaan; Waxaan ugu yeernaa 'silsiladda qiimaha maalgashiga'. Saldhigga aan aasaasnay ​​waa saldhigyo maalgashi waara oo lagu ururiyo soo-saareyaasha gobol sida 'nooc wax soosaaris oo ay ku habboon tahay' si loo sii wado waxsoosaarka-ganacsiga iyo silsiladda saadka ee dhammaan musiibooyinka iyo cudurada faafa. Sababta oo ah waxay siisaa wax soo saar ganacsi-maalgashi maalgashi ”.
SAXIIXA AY U FUDUDI KARAA XAALADAHA WIILKA
Waxaa kale oo jiri doona bakhaar ku xidhan saldhigga wax soo saarka go'doonsan. Markaa, hawlgallada dhoofintu waxay noqon doonaan kuwo fudud oo dhakhso leh. Badbaadada badeecada iyo fayadhowrka ugu badan ayaa la isticmaali karaa inta lagu jiro xirxirida iyo rarida. Meelahan ayaa sidoo kale bixin doona adeeg aag bilaash ah. Qawaaniintu waxay u furi doonaan fayadhowrka iyo kormeeridda kale ee kormeerayaasha ka imanaya waddamada shirkadaha soo dalbanaya ay xiriir la leeyihiin. Tani waxay taageeri doontaa isku halaynta iyo maareynta sumcadda ganacsiga.
BADBAADADA IYO AMMAANKA AMNIGA EE KELIYA CHANNEL
Warbixintu waxay ku nuuxnuuxsatay inay mahadsan tahay codsigan, jeermis-ku-tallaalidda iyo nadaafadda ku saleysan ka-hortagga ayaa laga hortegi doonaa nidaamka saadka. Waxaa la sheegay in khadka wax soo saar iyo gaadiid lagu bixin doono guryaha martida halkaas oo nooc kasta oo karantiil ah oo ay ka mid yihiin karantiillo caafimaad, oo ay ka mid tahay karantiil 14 maalmood ah, la aasaasey iyo guriga martida macquulka ah.
Sidee nolosha bulshada noqon doontaa?
DUGSIYADA IYO ADEEGYADA
Waxaa jiri doona bakhaarro ay ka mid yihiin bangiyo, xamuul, PTT, dukaamo qalab dheellitir ah, iibinta iibka, suuqyada, maqaayadaha. Waxaa jiri doona tiyaatar, shineemo iyo madxaf soo saar.
FARSAMADA FARSAMADA IYO FUEL
Goobaha soosaara tamarta iyo saldhigyada shidaalka waxay meesha ka saarayaan yaraanta tamarta ee ka dhici doonta kala guurka khadka tooska ah, kaydinta nadiifka ah. Kharashaadka tamarta ayaa sidoo kale hoos u dhigi doona tas-hiilaadka tamarta dib loo cusbooneysiin karo.
XIRFAD GUDBINTA XANAANADA IYO KHATARTA SUUGAANTA
Qeybta aruurinta biyaha roobka, xarunta aruurinta qashinka, isticmaalka tamar dib loo cusbooneysiin karo, xarunta dib u warshadeynta, dhul beereedka ay qodeen qodista ayaa dib loo isticmaali doonaa.
WAXBARASHADA iyo xiriirka caalamiga ah
Thanks to dugsiyada sare ee xirfadaha iyo iskuulada u dhigma ee la helay, labadaba waxbarasho iyo fursado shaqo ayaa la bixin doonaa. Waxbarashadu way sii socon doontaa iyada oo aan la carqaladayn 1000 xero arday.
KA QAYBGALKA DUMARKA EE KHUDBADAHA LABOR
Thanks to kindergarten-ka iyo xanaanada caruurta loogu talagalay goobta dhexdeeda, kaqeybgalka haweenka shaqaalaha ayaa la taageeri doonaa. Tallaabooyinka guryaha bulshada ayaa lagu kordhiyay guryaha dib-u-habeyn lagu sameeyay daacuunka, qolalka waaweenna waa laga soocay, taasoo ka dhigeysa inay sii go'doon noqdaan.
Caafimaadka iyo cayaaraha
Iyada oo la adeegsanayo farmasiga, xarunta caafimaadka iyo isbitaal buuxa, ayaa goobta wax laga qabanaya iyada oo aan loo bixin go'doomin, karantiil iyo dhibaatooyinka caafimaad ee suurogalka ah. Xarumaha sida barkadda dabaasha ee Olombikada, xarunta jimicsiga, kubbadda koleyga, kubbadda gacanta, maxkamadda ciyaarta laliska, qubeyska Turkiga ayaa la heli doonaa.
Masaajidka ayaa sidoo kale ku jiri doona gudaha saldhiga si uu u buuxiyo shuruudaha salaadda ee dadka ku nool aagga ku nool marka loo eego dareenka diineed.
Astaan ​​muhiim ah Varank
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa baaray gobolka uu diyaariyay intii lagu gudajiray booqashadiisa Tekirdag, wuxuuna ka qaatay furaha astaanta gobolka MUSIAD Madaxweynaha Abdurrahman Kaan.
Shiinaha ayaa xayiray shumaca tareenka magnetka tareenka
Btso Rolls Waxqabadka Lagu Hagaajinayo Shaqeynta Gemlik Harbour
Degmada Altıneylül waxeey wax ka qabataa dhibaatooyinka tareenada
Dawladda hoose ee degmada Kosovo 6 ayaa lagu soo rogay qalabka loo yaqaan "Underpass"
Ku-xigeenka Eldemir Bozuyuk ayaa xayeysiis u ah Xarunta Saadka
TCDD waxay wax ka qabataa gacan qabashada muwaadiniinta naafada ah
Adana Metropolitan ayaa duubtay gacmaha laydhka tareenka fudud
Davutoglu, Erzincan loogu talagalay mashaariicda tareenka xawaaraha sare leh
SAMULAŞ 'Air Transport' la malaasay in ay hubka
Waxaa lagu dhaawacay YHT Qaran
Bozankaya Gacmaha kor loo qaaday ee Waxsoosaarka Tareenka Xawaaraha Sare
Durmazlar U qabashada Lugaha Waddooyinka oo Loogu Tala Galay Subway Gudaha
Sidee nolosha bulshada noqon doontaa